WordPress: Ku dar Macluumaadka Qoraha ee Sidebar | Martech Zone
Cusboonaysiinta: Waxaan soo saaray Widget Sidebar ah si aan u muujiyo Macluumaadka Qorahaaga.
Qoraalka maanta ee Jon Arnold wuxuu ahaa mid cajiib ah talooyin ku saabsan qaabeynta degel, laakiin waxaan dareemay faallooyinkii ugu horreeyay ee aniga igu sifeeyay qoraalka. Taasi waa calaamad sheekeyn ah waxaan u baahanahay inaan ka dhigo macluumaadka qoraaga mid caan ah.
Uma abuurin wijetar tan (waana layaabay in cid kale aysan haysan!), Laakiin waxaan awooday inaan kufiirsado dhinacyadayda mawduucayga mawduucyada WordPress oo aan kudarto lambarka soo socda:
Bog hal bog ah, qayb dheeraad ah oo dhinaca bidix ah ayaa lagu daray oo leh sawirka qoraaga (adoo adeegsanaya a gravatar), magacooda oo buuxa, gurigooda iyo macluumaadkooda nololeed sida lagu sharaxay astaanta adeegsigooda. Waxaan ku daray labo fasalo si aan ula qabsado hubinta gravatar inuu u soo booday bidix iyo dhererka qaybta uu leeyahay ugu yaraan ugu yar haddii ay dhacdo in qoraa uusan wax macluumaad ah haynin.
hel_magaalada_meta('email') waxay dib u soo ceshanaysaa cinwaanka e-maylka ee qoraaga waxayna u gudbinaysaa shaqada get_avatar. Ku xikmad function wuxuu u tarjumayaa emaylka aqoonsi loo gudbiyay server-ka gravatar-ka si loogu dhejiyo sawirka ku habboon. Tani waa lagama maarmaan maadaama aad rabto inaad iska ilaaliso sameynta cinwaanka emaylka ee laga heli karo isha bogga… spammers waxay jecel yihiin inay soo gurtaan emails.
Xogta kale waxaa si fudud loola soo baxaa iyadoo la isticmaalayo _macalin_meta macluumaadka.
Tags: aqoonsigaFiidiyowyada Suuqgeyntamoviewordpress cse
Wax ku ool ah #Twitter #Sarking leh #Hashtags
Jul 24, 2009 markay tahay 12:33 PM
Miyaanay ahayn wax la yaab leh in la yeesho fikrad oo isla markiiba la fuliyo? Taasi waa suurtagal sababtoo ah Freedom One (http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html) - "Xorriyadda barashada sida barnaamijku u shaqeeyo, oo loo beddelo si ay uga dhigto waxa aad rabto."
Jul 24, 2009 markay tahay 11:58 PM
Waxaan ogaaday in akhristaha RSS aan wali kuugu liis gareyno inaad tahay qoraa qoraal kasta. Fursad kasta oo wax looga beddelayo taas markaa waxay muujinaysaa magaca qoraaga halkii?
Jul 25, 2009 markay ahayd 12:10 AM
Waad ku mahadsantahay tilmaamida taas, Ade! Taasi waxay ahayd dejiyaha Feedburner si quudinta looga dhigo mid u dhiganta iTunes (oo aanan u baahnayn!). Si xiiso leh, ku darista qoraaga quudinta waxay u baahan kartaa xoogaa horumar ah!
Jul 25, 2009 markay tahay 9:49 PM
Hadda la sii daayay: Nooca 1.0.0 ee WordPress Sidebar Author Widget!
Agoosto 12, 2009 saacaddu markay ahayd 12:13 PM
Ma waxaad dooneysaa inaad ku martigeliso taas wordpress.org si aan u helno cusbooneysiin?
iyo sida su'aalaha labaad: haddii aan rabo inaan muujiyo tusaale AIM oo keliya markii la buuxiyo, miyaan isticmaali karaa isla lambarradaas si aan taas u sameeyo mise waxay sidan u bixin doontaa sidan: "AIM:" Waxaan jeclaan lahaa inaysan soo bandhigin wax haddii wax soo saarku waa faaruq…
Waxaan u badinayaa inaan wax ka badali doono sheybaarkaaga boggeyga si aan u soo bandhigo noolaha iyo macluumaad yar oo dheeraad ah: la xiriir sida icq, ujeedka, xfire iyo wixii la mid ah.
Agoosto 21, 2009 saacaddu markay ahayd 1:48 PM
Waa maxay fikrad argagax leh oo aad widget-kaaga ku dareyso gravatar sidebar waa. (Waa inaan qirto xitaa ma aqaan erayga gravatar, illaa aan raaco xiriiriyahaaga si aan u ogaado - mahadsanid). Xaqiiqdii waxaan rakibayaa qalabkaaga barta miinada.
BTW, macluumaad badan oo weyn oo ku saabsan bartaada, runtii waan ku faraxsanahay inaan helay.